Vatovavy Fitovinany: tsy tafavoaka ny vokatra any Tolongoina | NewsMada
Vatovavy Fitovinany: tsy tafavoaka ny vokatra any Tolongoina
Mijaly ny mponina any amin’ny kaominina Tolongoina sy ny manodidina. 50 km miala eo Fianarantsoa misy an’i Tolongoina, mandeha amin’ny lalam-by FCE, saingy atao ora telo izay lalana izay. Samy efa antitra ny fiaran-dalamby sy ny lalamby fa mahazaka mpizahatany vahiny hijery ny zavaboahary amin’iny lalamby mampitohy an’i Fianarantsoa sy Manakara iny. Tsy nisy fanamboarana izany hatramin’ny Repoblika faharoa ! Izay ilay fampandrosoana nampanantenain’ny mpitondra nifandimby hatramin’izay ary mbola tohizana amin’izao fampielezan-kevitra izao.
Ny ao Tolongoina mahavokatra maro : akondro, sakamalao, kafe, lavanila, jirofo. Ny sakamalao, ohatra, mahavokatra 200 t isan-taona ; ny lavanila, 60 t isan-taona. Ny taona 2000 vao nanomboka namboly sakamalao ny mponina fa ny akondro mahazatra azy ireo hatramin’izay. Tsara rahateo koa ny vidiny raha oharina amin ‘ny vokatra hafa, ankoatra ny lavanila. Ny fitarainan’ny mponina hatramin’ny ela fa tsy misy mpihaino ny vokatra tsy tafavoaka noho ny fahasoratan’ny fitaterana. Manampy izany ny asan-dahalo, mampihemotra ireo tantsaha amin’ny asany.
Miantraika any amin’ny fiainan’ny tantsaha sy ny fivelomany ny fahasarotan’ny fitaterana. Zara raha misy mpanangom-bokatra tonga. “Raha ny akondro, ohatra, saika simba eo an-toerana fotsiny ny 80 % mahery, ka voatery amidy mora, 100 Ar na 150 Ar ny kilao”, hoy ny mponina any an-toerana. Vao tonga ao Fianarantsoa anefa ny akondro efa tsy latsaky ny 1.000 Ar ny kilao.
Tsy misy lalana Ifanadiana-Ikongo
Mbola hafa ireo vokatra tsy tafavoaka any Ifanadiana sy Ikongo, 68 km, noho ny tsy fisian’ny lalana. Mahalana dia mahalana ny fahitana fiaravaventy tonga any an-toerana ao anatin’ny iray volana. Efa 20 taona toy izany, indrindra fa amin’ny fotoam-pahavaratra, simba fotsiny ny vokatra rehetra. Vokatr’izany : mahantra tanteraka ny mponina, ny ankizy zara raha mianatra, ny toeram-pitsaboana raha misy any amin’ny kaominina sasany, ny fitaovana tsy ampy, na tsy misy mpiasa, ka tsy mahagaga raha betsaka ny reny maty eo am-piterahana.